Ukuqonda ukuHanjiswa kweDilesi, ukuHanjiswa koMgangatho, kunye nokuQinisekiswa kwee-API | Martech Zone
Ngaphambi kokusebenza kwi-Intanethi, ndisebenze ishumi leminyaka kwiphephandaba kwaye ndithumela ngqo kwimizi-mveliso yeposi. Kuba ukuthumela okanye ukuhambisa unxibelelwano lokuthengisa ngokwasemzimbeni kwakubiza kakhulu, sasilumke kakhulu malunga nococeko lwedatha. Sasifuna isiqwenga esinye kwindlu nganye, singasayi kuphinda. Ukuba sihambise iqela lamaqhekeza eposi ngqo kwidilesi, ibangele imiba emininzi:
Umthengi okhathazekileyo onokukhetha ukuphuma kulo lonke unxibelelwano lokuthengisa.
Inkcitho eyongezelelweyo yokuposa okanye yokuhambisa kunye neendleko ezongezelelweyo zokuprinta
Ngokwesiqhelo, besifuna ukuba sibuyisele imali kumthengisi xa bezise iikopi eziphindiweyo.
Ukongeza, iidilesi ezingagqitywanga okanye ezingachanekanga zimbuyiselo eziyimfuneko kunye neendleko zokuhambisa ezingeyomfuneko ngokunjalo.
Phantse iipesenti ezingama-20 zeedilesi ezifakwe kwi-intanethi zineempazamo - iimpazamo zopelo, iinombolo zezindlu ezingalunganga, iikhowudi zeposi ezingachanekanga, iimpazamo zokufomatha ezingahambelani nemigaqo yeposi yelizwe. Oku kungakhokelela kuthumelo mva okanye olungafumanekiyo, inkxalabo enkulu kunye neendleko kwiinkampani ezenza ushishino ngaphakathi nakwimida.
idilesi ukuqinisekiswa akukho lula njengokuba isenokuvakala, nangona kunjalo. Ngaphandle kwemicimbi yopelo, veki nganye kukho iidilesi ezintsha ezongezwa kwindawo yogcino zedatha kwilizwe lonke. Kukwakho needilesi eziguqulwayo, njengoko izakhiwo zitshintsha zisuka kwezorhwebo ziye kwindawo yokuhlala, okanye usapho olunye luye kuhlala kwiintsapho ezininzi, umhlaba weefama wahlulelwa abamelwane, okanye ubumelwane bonke buphuhliswa ngokutsha.
Inkqubo yokuQinisekiswa kweDilesi
Idilesi idlulisiwe -Njalo inombolo yendlu, idilesi, izifinyezo, upelo-magama, njl.
Idilesi ibekwe emgangathweni - yakube idlulisiwe, idilesi iphinda ibuyiselwe kumgangatho. Oku kubalulekile kuba I-123 ephambili iSt. kwaye I-Street Street 123 ziya kuthi emva koko zibekwe emgangathweni 123 Eyona St kwaye ikopi inokulingana kwaye isuswe.
Idilesi iqinisekisiwe -Idilesi esemgangathweni iyahambelana nayo kwiziko ledatha lesizwe ukubona ukuba ikhona ngokwenene.
Idilesi iqinisekisiwe - ayizizo zonke iidilesi ezinokuhanjiswa nangona zikhona. Lo ngumba omnye wokuba iinkonzo ezinje ngeMaphu zikaGoogle zinayo… zikunika idilesi efanelekileyo kodwa kusenokwenzeka ukuba kungabikho sakhiwo apho sinokuhambisa khona.
Yintoni ukuqinisekiswa kweedilesi?
Ukuqinisekiswa kwedilesi (ekwabizwa ngokuba kukuqinisekiswa kwedilesi) yinkqubo eqinisekisa ukuba zikhona iidilesi zasesitalatweni naseposini. Idilesi inokuqinisekiswa ngenye yeendlela ezimbini: ngaphambili, xa umsebenzisi ekhangela idilesi engachanekanga okanye engagqitywanga, okanye ngokucoca, ukucoca, ukuthelekisa kunye nokufomatha idatha kwiziko ledatha ngokuchasene nedatha yeposi ekubhekiswa kuyo.
Yintoni ukuqinisekiswa kwedilesi? Izibonelelo kunye neemeko zokusebenzisa zichaziwe
Ukuqinisekiswa kwedilesi ngokuQinisekiswa kweDilesi (inkcazo ye-ISO9001)
Ayizizo zonke iinkonzo zeedilesi ezifanayo, nangona kunjalo. Iinkonzo ezininzi zokungqinisisa idilesi ziya kusebenzisa imigaqo yendlela yokutshatisa indawo yogcino lwedatha. Ngamanye amagama, inkonzo inokuchaza ukuba ngaphakathi kwe-zip 98765 kukho ifayile ye Street Street kwaye iqala kwidilesi yoku-1 kwaye iphele nge-150. Ngenxa yoko, i-123 Main St ngu-a ivumelekile Ekhaya ngokusekwe kulwazi, kodwa hayi ngokuyimfuneko a qi nisiwe idilesi apho into inokusiwa khona.
Lo ngumba ophantsi weenkonzo ezibonelela ngobude kunye nobude ngedilesi ethile. Uninzi lwezo nkqubo zisebenzisa izibalo ukucazulula ngokufanelekileyo iidilesi kwibhloko kwaye zibuyisele ubude nobude bekhompyuter. Njengabathengisi, iivenkile zokutyela, kunye neenkonzo zokuhambisa zisebenzisa ixesha elide / elide ukuhanjiswa komzimba, oko kunokubangela imicimbi. Umqhubi usenokuba usezantsi kwebhloko kwaye akanakukufumana ngokusekwe kwidatha ekuqikelelwe kuyo.
Ukufaka idatha yeDilesi
Ndisebenza nenkonzo yokuhambisa ngoku apho abathengi bangenisa ulwazi lweedilesi zabo, inkampani ithumela ngaphandle yonke imihla, kwaye emva koko ibahambise ngokusebenzisa enye inkonzo. Yonke imihla, zininzi iidilesi ezingenakuthunyelwa ekufuneka zilungisiwe ngaphakathi kwenkqubo. Oku yinkcitho yexesha elinikiweyo kukho iinkqubo ezinokulawula oku.
Njengoko sisebenzisa inkqubo, sisebenza ukumisela umgangatho kunye nokuqinisekisa idilesi xa singena. Yeyona ndlela ilungileyo yokuqinisekisa ukucoceka kwedatha yakho. Nika idilesi yokuhambisa esemgangathweni, eqinisekisiweyo kumthengi xa engena kwaye bavume ukuba ichanekile.
Kukho imigangatho embalwa oya kufuna ukuyibona ukuba amaqonga asebenzise:
Isiqinisekiso seCASS (United States) -iNkqubo yokuNika iNkcazo yokuChaneka kweKhowudi (i-CASS) yenza ukuba i-United States Postal Service (i-USPS) ivavanye ukuchaneka kwesoftware elungisa kunye nehambelana needilesi zendlela. Ukuqinisekiswa kwe-CASS kunikezelwa kubo bonke abaposi, ii-bureaus zenkonzo, kunye nabathengisi besoftware abanqwenela ukuba i-USPS ivavanye umgangatho wesoftware ehambelana nedilesi kunye nokuphucula ukuchaneka kwe-ZIP + 4, indlela yokuhambisa kunye nekhowudi enamanani amahlanu.
Isiqinisekiso se-SERP (Canada) -Uvavanyo lweSoftware kunye neNkqubo yoKwamkelwa sisiqinisekiso seposi esikhutshwe yiCanada Post. Injongo yayo kukuvavanya ukubanakho kwesoftware ethile ukuqinisekisa nokulungisa iidilesi zemeyile.
Ukuqinisekiswa kweedilesi APIs
Njengoko benditshilo apha ngasentla, ayizizo zonke iinkonzo zokuqinisekisa idilesi ezenziwe ngokulinganayo- ke uya kufuna ukugcina iliso kuyo nayiphi na imiba enokuvela. Ukugcina iipeni ezimbalwa kwinkonzo yasimahla okanye yexabiso eliphantsi kunokubangela idola kwimicimbi yokuhambisa esezantsi.
UMelissa uhambisa okwangoku Iinkonzo zokuqinisekisa idilesi yasimahla iinyanga ezintandathu (ukuya kuthi ga kwiirekhodi ezili-100K ngenyanga) kwimibutho efanelekileyo efanelekileyo esebenzayo ukuxhasa uluntu ngexesha lobhubhane we-COVID-19.
UMelissa COVID-19 iMinikelo yeNkonzo
Nazi ii-API ezidumileyo zokuqinisekisa idilesi. Uya kuqaphela ukuba iqonga elinye elidumileyo alikhankanywanga- IGoogle API yeMephu. Kungenxa yokuba ayisiyo nkonzo yokuqinisekisa idilesi, yile Ukwenza iikhowudi inkonzo. Ngelixa ifanekisa kwaye ibuyisa ubude kunye nobude, oko akuthethi ukuba impendulo iyidilesi ehambisekayo, ebonakalayo.
I-Easypost -Ukuqinisekiswa kwedilesi yase-US kunye nokuqinisekisa okukhula ngokukhawuleza kwedilesi.
Experian Ukuqinisekiswa kwedilesi kumazwe angaphezu kwama-240 kunye nemimandla kwihlabathi liphela.
indumiso -Nedatha evela kumazwe angaphezu kwama-240 kwihlabathi liphela, iLob iqinisekisa iidilesi zasekhaya nakwamanye amazwe.
I-Loqate Isisombululo sokuqinisekisa idilesi esiya kuthi sibambe, sihambise, simise ngokomgangatho, siqinisekise, sihlambulule, kwaye sifomathe idatha yedilesi yamazwe nakwimimandla engaphezu kwama-245.
melissa -Ungqina iidilesi zamazwe ayi-240 + kunye nemimandla kwindawo yokungena kunye nebhetshi ukuqinisekisa ukuba kuphela iidilesi zokuhlawula kunye nokuhambisa ziyasebenza kwaye zisetyenziswa kwiinkqubo zakho.
I-SmartSoft DQ -Ibonelela ngeemveliso ezizimeleyo, ii-API zokuqinisekisa idilesi kunye nezixhobo eziza kudibanisa ngokulula kwizicelo ezikhoyo ezixhomekeke kwidilesi.
Iinkcukacha zeSmarty Unedilesi yesitalato yase-US e-API, i-Zip Code API, i-API eQedela ukuGqitywa, kunye nezinye izixhobo zokudibanisa usetyenziso lwakho.
ibha Uphendlo lwe-TomTom kwi-Intanethi yesicelo se-geocoding inikezela ngesisombululo ekulula ukusisebenzisa sokucoca idatha yedilesi kunye nokwakha idathabheyisi yeendawo ezi-geocoded.
tags: idilesi apiidatha yedilesiidilesi ye-geocodingUkwahlula idilesiukubekwa emgangathweniUkuqinisekiswa kwedilesiukuqinisekiswa kwedilesisifumisoxnumxlobYenzaniIdatha kaMelissasmartsoft dqTomtom